Gadzirira browser yako yeFirefox kusvika kune yakanyanya | Linux Vakapindwa muropa
Firefox iri imwe yeanonyanya kufarira mabhurawuza pawebhu, Kupiwa iyo ndeye Multiplatform bhurawuzaTinogona kuishandisa zvese pakombuta uye panhare mbozha. Ichokwadi icho nezvitsva zvitsva iyo bhurawuza yanga ichiita, yakazvimisikidza pachayo munzvimbo yakanaka.
Naizvozvi yakawana mukurumbira wakawanda uye yakagonesa akati wandei ekugona kuishandisa, mune yangu handisi iyo yakasarudzika, asi chimwe chinhu chandisingafarire ndechekuti inosanganisira mamwe mabasa ayo kwandiri asina basa ayo anongoita kuti browser rireme.
Kunyangwe ndichifara nebasa rakanaka raitwa neFirefox Quantum, kubva pakuona kwake ane zvinhu zvakati wandei kupolisha.
Apa ndipo pandinopesana, kunyangwe ndichifunga kuti ndine zviwanikwa zvakakwana kuti ndikwanise kushandisa bhurawuza pasina matambudziko, ndiri mumwe wevanhu vasingafarire mari isingakoshi yavo kana isiri yechinhu chinogadzira kana icho chiri chaiko ikoko.
Ndokusaka ndichigovana newe mamwe marongero atinogona kugadzira kubhurawuza redu uye kukwanisa kurerutsa.
1 Disable Mhoro, Pocket, uye Firefox yekuverenga maonero.
2 Limit mazano
3 Bvisa zviwedzero zvisina basa.
4 Mifananidzo isingakoshi
5 Natsiridza kushandiswa kwePipelinin
6 Sunungura kumusoro ndangariro nekudzora
7 Shandisa iyo mushandisi.js faira
Disable Mhoro, Pocket, uye Firefox yekuverenga maonero.
Pakati pekutanga hunhu hwandinofunga husina basa ndeiyo Bhurawuza kuverenga kwekutarisa, kubva pane yangu maonero maonero, iri basa rinofanirwa kungoitwa pama komputa ane touch skrini, uye mashandisiro ayo ndeasarudzo.
Rimwe basa ndiHero, iro ratingaite nhare dzevhidhiyo nekugovana chinongedzo.
Imwe ndeye Pocket plugin iyo inochengetedza mapeji ewebhu kuFirefox.
Uye sezvandinotaura mune yangu nyaya ini handigare chero uye kuva nazvo hakuna basa, kuita kuti sarudzo idzi dzisashande pane plugin ye firefox Isu tinoitora kubva pane inotevera chinongedzo uye tobvisa izvi zvitatu.
Imwe nzira ndeyekunyora mubharaki rekero nezve: gadzira uye mune yemukati yekutsvaga injini tinonyora muhomwe
Uye mune yesarudzo yekuwedzera.
Tinogona tsvaga kubva kubara rekero, izvi zvichatiratidza imwe yemazano, asi kana iwe ukasanganisira diagonal kana poindi mune yako zano, zvinovatora sekunge yaive url, saka inoitwa zvisirizvo, asi tinogona kudzikamisa izvi kubva nezve: config
Kutsvaga browser.urlbar.maxRichResults Tinogona kugadzirisa huwandu hweizvi izvo isu zvatinoda kuratidzwa.
Bvisa zviwedzero zvisina basa.
Zviri pachena kuti kushandiswa kweiyo ekuwedzera kunoshamisa, asi kuvashungurudza kuri kurodha pasi browser uye nekudya ndangariro kuchikara, pese pandinoona kujairana nebrowser yake izere navo ini ndinoona zvinotevera:
Tichifunga kuti izvo zvinodiwa zvakasiyana apa ini handiwane yakawanda.
Aya maratidziro anoshandisa zviwanikwa zvechikwata, saka kubva mumaonero angu hazvishande,
Kuti vadzivise zvakare mumasetingi isu tinotsvaga zvinotevera: toolkit.cosmeticAnimations.enabled uye isu tinoshandura kukosha kuita nhema
Natsiridza kushandiswa kwePipelinin
Firefox inoshandisa iyi modhi kwenguva yakati wandei nayo iyo browser ita zvikumbiro zvakawanda zvisati zvapindurwaMuchidimbu, kana uchitsvaga pawebhu peji, ine CSS zvidzitiro machira, js, html mafaera uye nevamwe.
NePipelining isu tinodzora iyo yekukodha nguva yemapeji, kunyange ichingoshanda chete pamaseva anotsigira chiitiko ichi.
Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kuita zvinotevera mune: config isu tinotsvaga kupomba "uye mune sarudzo"network.http.pipelining"Kukosha uku kunofanirwa kuve kwechokwadi kana zvisiri, iwe shandura, izvozvi tinofanirwa kutsvaga:
network.http.pipelining.maxrequests seta kukosha = 8 (inogona kuve tsika kubva pa1 kusvika pa8, iyo yakasarudzika iri 4)
network.http.proxy.pipelining seta iyo value = true (inoshanda chete kana ukashandisa proxy)
Tarisa makiyi anotevera:
network.http.keep-live zvinofanirwa kuve zvechokwadi kuti pombi ishande.
network.http.version Inofanira kunge iri 1.1 kuti pombi ishande.
Sunungura kumusoro ndangariro nekudzora
Tinogona kuita Firefox kudzora ndangariro kushandiswa nekudzora browser. Kune izvi tinoshandura kukosha config.trim_on_minimize a zvechokwadi.
Shandisa iyo mushandisi.js faira
Kana iwe ukashandisa kubatana kwepamusoro-soro, Firefox haishandisi nayo zvizere sezvo kuchine avo vachiri kushandisa dial-up kubatana, ndosaka ndichigovana kumisikidzwa kweiyi faira kune ese mamiriro ezvinhu. Isu tinofanirwa kurodha pasi inotevera zip faira iyo yavanogovana nesu uye nekuisa iyo faira mufaira rako Profiles.
Fuente: Dhawunirodha mushandisi.js
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Gonesa browser rako reFirefox kuti riwedzere
Iyi posvo yakanaka kwandiri.
Santos Nogueras akadaro
Chekutanga pane zvese, maita basa.
Ndine akati "maficha" maforodha pane ino sisitimu, unogona kundiudza kuti ndeipi forodha yandinofanira kuteedzera iyo user.js faira?
Pindura Santos Nogueras
Juan Gutierrez Arnau akadaro
Regedza chinyorwa, iwo manomano ezvinyorwa zvekare zve firefox, kwete zveazvino
Pindura Juan Gutierrez Arnau
Dzimwe sarudzo, dzekupedzisira, dziri kushanda hadziwanikwe mushanduro dzazvino. Asi ini handisi shamwari yemamwe maficha ... saka iparera izvo chete.
Stellarium: Chirongwa chekuona nyeredzi kubva pakombuta yako.